Naiditra vonjimaika am-ponja eny Antanimora ilay mpamily fiara vaventy niteraka lozam-pifamoivoizana tetsy Anosibe, ny herinandro lasa teo. Tsiahivina fa ankizilahy 10 taona sy ramatoa iray 45 indray namoy ny ainy teo no ho eo tamin’izany, raha maty ora maromaro taorian’ny loza kosa ny vehivavy iray hafa 36 taona. Voalaza fa tapaka hisatra ilay kamiao mpitondra entana io ka nifatratra tamina tsenakely amoron-dalana.
Nizaran’ny polisy avy ao amin’ny kaomisarian’ny boriborintany voalohany (CSP1) Analakely kifafa tsirairay avy ireo mpivarotra eo Analakely kanefa misaron-tava avokoa izy rehetra. Tsy fanasaziana ny natao fa fampianarana ireo mpivarotra hadio, indrindra amin’izao fiparitahan’ny valanaretina Coronavirus izao. Nanamafy ny eo anivon’ny CSP1 fa tsy voatery hanasazy ny polisy fa manabe ny mpampiasa lalana ihany koa rehefa hita fa mahasoa ny mpiray tanindrazana izany. Hitohy, araka izany, ny hetsika fanentanana ireo mpivarotra hanadio ny manodidina ny toeram-pivarotan’izy ireo.
Nitrangana fanafihan-jiolahy mitam-basy miharo herisetra tao amina tsena iray ao amin’ny Troisième quartier Ambondromamy, Ambato-Boeny, ny alin’ny asabotsy teo. Vokany, lasan’ireo andian-jiolahy enina tsy nisaron-tava ny vola antapitrisany maro. Voaroba koa ny firavaka teny amin’ilay tompon-tsena. Taorian’ny tranga, nifanenjehan’ny fokonolona ireo jiolahy ka tratra ny iray raha tafaporitsaka kosa ny ambiny. Niharan’ny hatezeram-bahoaka ilay voasambotra ka maty namoy ny ainy. Nilaza kosa ny mpitandro filaminana fa mitentina 20 tapitrisa Ar ny lelavola voaroban’ireo jiolahy. Mbola mitohy ny fanadihadiana ny raharaha.